MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA EYDA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha eyda
Jack Russell Terrier / Pembroke Welsh Corgi Dogs Nooc Isku Daran
Russell the Cojack breed breed (Jack Russell Terrier / Corgi mix breed) 8 sano jir
Burcad badeedu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Jack Russell Terrier iyo Pembroke Welsh Corgi . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga isku dhafka ah ee Canine American = Cojack
Diiwaan Geliyaha Naqshadeeyaha = Welsh Cojack ama Cojack
Naqshadeeye Eeyaha Ey Kennel = Welsh Cojack
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Welsh Cojack
'Waxaan eegay isku dhafka' JaCorgi ', taasi waa waxa aniga iyo asxaabteydu ugu yeeraan, laakiin waxaan ogaadey inaan khaldanahay. Waxaa loo yaqaanay 'Gujack !! Kani waa Jackie! Iyadu waa Cardigan Welsh Corgi oo lagu qasay Jack Russell. Waxaan aaminsanahay inay haysato badh iyo badh labada waalidba. Aad bay u macaan tahay! Wuxuu jecel yahay dadka oo uu leeyahay feejignaan dhan. Wadarta shaqsiyadda Jack Russell, wuxuu jecel yahay inuu la legdamo alaabteeda oo uu ku tuuro qolka oo dhan ka dibna uu ka daba ordo oo 'Dila' !! Aad ayey u cod badan tahay, habeen kasta waxaan weydiiyaa 'ma inaad u-baxdid xiiq-sane ??' Haddii ay tahay inay tagto waxay ku jawaabaysaa guux weyn iyo haddii kale jilif! qosol! Iyadu ma ahan mid cod dheer marka loo eego astaameeyaha laakiin waa taaha iyo guuxa badan. Iyadu waa tuugsi !! Waxaan isku dayaa inaan baro inay joojiso laakiin waxay si toos ah ugu taagantahay labadeeda lugood ee dambe iyo wareegyada hareeraha oo way istaagi kartaa xoogaa, runti waxay leedahay isku dheelitirnaan wanaagsan. Waxay miisaankeedu yahay 21 rodol. Waxay jeceshahay inay daaqdo waxyaabo, astaamo Corgi ah, eey kasta oo kale macno malahan labaatan jeer ka weyn iyada, iyadu way u hoggaansami doontaa. Wuxuu sifiican ula socdaa eeyaha kale iyo bisadaha. Waxay ku boodi kartaa ilaa afar fuudh hawada markay faraxsantahay! Koodhkeedu waa sida isku dhafka ugu fiican ee u dhexeeya timaha siligga iyo jilicsanaanta. Waa dherer dherer dhexdhexaad ah waxayna daadinaysaa xoogaa sannadka oo dhan. Way xoogaa madax adag tahay mararka qaarna waxaan u malaynayaa inay iyadu aad u caqli badan tahay wanaaggeeda! Jackie si fudud waa awood-sare, dad-jecel, aad u caqli badan Cojack! Waan jeclahay iyada ilaa geerida, waxaan jeclahay inay iyadu tahay mid isku dhafan oo udhaxeysa labada taranka! '
Winston the Cojack (Pembroke Welsh Corgi / Jack Russell Terrier breed breed) qiyaastii 1 sano jir ah— 'Tani waa Winston! Wuxuu leeyahay wejiga Jack Russell Terrier oo leh lugaha Corgi! Ey ahaan, wuxuu ku yara adkaaday maareeyntiisa laakiin 'marxaladdiisii ​​dhallaanka' ka dib wuxuu hadda jecel yahay inuu salaaxo habeen kasta (iyo maalmaha caajiska qaarkood), meel walba na raac, xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu banaanka u baxo bilaa xadhig! Lixdii bilood ee ugu horreysay waxaan aad ugu dhowaanay inaan ka quusano tababarka dheriga maxaa yeelay waxay umuuqatay inaanay meelna usoconayn, laakiin maalin uun meella'aan, boog, kuligood way dhagsiiyeen .... Markaa hadaad milkiile wadaag tihiin oo dhibaato haysato, ha is dhiibin! Maalin uun digniin la'aan way dhici doontaa. Winston waa sida eey-jecel, eey firfircoon. Mid ka mid ah jilitaankiisa badan ayaa gadaal u dhigaya hawada markii uu helayo jacayl ama dareen, gaar ahaan dadka cusub! Waxaan sidoo kale ka helnay 'bar cuncun' oo ah qoorta gadaashiisa oo u direysa lugtiisa dambe tartanka! Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro tiisa alaabta lagu ciyaaro , wuxuu hayaa waxoogaa yar, oo wuxuu la ciyaarayaa eeyga kale, Charlie! Charlie waa toddoba jir Bichon frize , iyo fart duug ah oo aan idhaahdo ugu yar. Mar kasta oo Winston uu ku jiro xaalad ka baxsan xakamaynta, taas oo had iyo jeer ah, wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro Charlie, in kasta oo Charlie uun guuxayo oo uu isku dayo inuu ka fogaado waalida Winston !! Haddii aad ka fikirayso afduubka 'Cojack', u diyaar garow a tamar badan !! Kaba dheelitir xitaa jacayl ka badan intaad qiyaasi lahayd. '
Winston the Cojack (Pembroke Welsh Corgi / Jack Russell Terrier mix mix dog) qiyaastii 1 sano jir
eeyaha ayaa dhasha oo ka bilaabma s
Winston the Cojack (Pembroke Welsh Corgi / Jack Russell Terrier breed breed) qiyaastii 1 sano jir
Winston the Cojack (Pembroke Welsh Corgi / Jack Russell Terrier breed breed) sida eey
Tory eey isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Corgi / Jack Russell' (Cojack)
Toby the Cojack mix eyga 8 bilood jira— Isagu waa isku darka Corgi / Jack Russell. Aad buu u jilicsan yahay wuxuuna muujiyaa astaamaha qoyska cabsi badan. Wuxuu helay midabada JR, laakiin jirka Corgi. Aad buu u dheer yahay walina wuu korayaa. ''
Toby isku dhafka ah ee loo yaqaan 'Cojack mix' eey 8 bilood jir ah (Corgi / Jack Russell mix)
Russell the Cojack breed breed as 8 sano jir ah— Waa Jack Russell x Corgi indho buluug ah ! '
jir cavalier king charles spaniel
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Burcadbadeedii
Liiska eeyaha ee loo yaqaan 'Corgi Mix Breed'
iskudhafka iskudhafka iskudhaf ee american bulldog labrador
pomeranian weiner ey isku darka iibka